Mpamatsy horonam-bokatra mixer Disc mora vidy sy orinasa | YiZheng
izany Masinina fampifangaroan'ny zezika kapila Ampiasaina indrindra amin'ny fampifangaroana fitaovana tsy misy olana amin'ny tehina amin'ny alàlan'ny fisoratana amin'ny takelaka polypropylene sy ny fitaovana vy tsy misy fangarony, manana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro izy, miasa mora, manetsiketsika ny fanamiana, mampidina entana ary mampita.
Inona ilay masinina mixer disc?
ny Masinina fampifangaroan'ny zezika kapila mampifangaro ireo akora simika, misy kapila fampifangaroana, sandry mifangaro, fefy, fonosana boaty ary mekanisma fandefasana. Ny mampiavaka azy dia ny fisian'ny varingarina eo afovoan'ny kapila mifangaro, ny fonosana varingarina dia apetraka eo amin'ny amponga, ary ny sandry mifangaro dia mifamatotra mafy amin'ny fonon'ny varingarina. Ny tendrony iray amin'ireo zana-kazo mampihetsi-po dia mifamatotra amin'ny fonosana varingarina mandalo ny varingarina, ary atosika ny zana-pandrehitra. Mihodina ny fonosana varingarina, noho izany mitondra ny sandry mampihetsi-po hihodina, ary ny mekanisma fandefasana izay manosika ny vatan-tsolika avy amin'ny rafitra fandefasana dingana efatra.
Inch mpanapaka ivelany
Inona no ilana masinina mixer disc?
Masinina mixer disc / pan no tena ampiasaina hamokarana akora mifangaro amin'ny zezika. Ny mixer dia mihodina amin'ny fihodinana ary ny fitaovana mifangaro dia hafindra mivantana avy amin'ny fitaovana fampitana mankany amin'ny fizotry ny famokarana manaraka.
Fampiharana masinina mixer disc
ny Masinina fampifangaroan'ny zezika kapila afaka afangaro ny akora rehetra ao anaty mixeur hahatratrarana fitaovana fampifangaroana milamina sy feno. Izy io koa dia azo ampiasaina ho fitaovana fampifangaroana sy fahanana amin'ny tsipika famokarana zezika iray manontolo.
Tombony azo avy amin'ny masinina mixer disc
Ny lehibe Masinina fampifangaroan'ny zezika kapila ny vatana dia nopetahany takelaka polypropylene na vy vy, ka tsy mora ny mifikitra sy mitafy mahatohitra. Ny reducer kodiarana cycloid dia manana ny mampiavaka ny firafitra mifangaro, ny fandidiana mora, ny fanetsiketsehana ary ny famoahana mety.
(1) fiainana maharitra, fitsitsiana angovo ary fitsitsiana angovo.
(2) Kavina kely sy hafainganam-pandeha haingana.
(3) famoahana tsy tapaka mba hamaly ny fitakiana famokarana mitohy ny tsipika famokarana iray manontolo.
Fampisehoana horonantsary mixer disk
Safidy maodely mifangaro amin'ny zezika kapila
Teo aloha: Mpifangaro zezika marindrano
Manaraka: Mixeran'ny zezika BB